​लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन ?
Thursday, 23 Nov, 2017 1:55 PM
एउटा गीत छ, ‘भन्छन् लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुन्न रे...’ । नेपाली समाजको पुरानो भनाई पनि हो यो । साँच्चै लोग्ने मान्छेले रुनु हुन्न किन भनियो होला ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पछिल्ला केही दिनले यो प्रश्नलाई झन् अगाडि ल्याइदियो ।
गत आइतबार प्रकाशको निधनमा आमा सीता दाहाल रोइन्, श्रीमती रोए, दिदी–बहिनी रोए, आफन्तहरु रोए, तर प्रचण्ड सकेसम्म नियन्त्रणमा रहे ।
पशुपति आर्यघाटमा छोराको अन्तिम संस्कारमा प्रचण्डको पीडा राम्रैसँग छाम्न सकिन्थ्यो । छोरालाई दागबत्ती दिँदै गर्दा उनको अनुहार नराम्रोसँग अमिलिएको थियो । आँखाभरी आँशु भरिइसकेको थियो । तर, भित्रै दबाए, बाहिर खस्न दिएनन् । अमिलो अनुहार लिएरै उनले उपस्थिततिर फर्किएर दुवै हात उठाए ।
साँझ लाजिम्पाट फर्किएपछि पनि सम्हालिए र परिवार सम्हाल्ने कोसिस गरे । पीडा भएपनि आँशु थाम्नुपरेको संकेत सोमबार शुभचिन्तकमाझ प्रचण्डले गरे । निन्याउरो अनुहार लगाएका शुभचिन्तकमाझ प्रचण्डले सहाससाथ बाहिर निस्केर सम्बोधन गरे ।
उनी आफू सम्हालिँदै पत्नी सीतालाई पनि सम्हाल्दै छन् । प्रकाशजस्ता छोराछोरी देशमा धेरै भएको र जनताले आफूहरुबाट अभिभावकको भूमिका खोजेको भन्दै पत्नीलाई सम्झाइरहेका छन् ।
मंगलबार उनी पत्नी सीतालाई साथमै लिएर चुनावी सभा कार्यक्रमका लागि चितवन गए । छोरो बितेको दुई दिनमै उनी पीडा पचाएर चितवन पुगेका थिए । भरतपुर चुनावी सभामा प्रकाशलाई श्रद्धान्जली दिँदै गर्दा पत्नी सिता एकाएक भक्कानिइन् । भक्कानो त प्रचण्डको मनमा पनि परेको थियो होला, तर उनी सम्हालिए, पत्नीलाई सम्झाउनतिर लागे ।
त्यही कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा जनवादी गायक खुसीराम पाख्रिन पनि हृदयघात भएरै गए । पीडामाथिको पीडामा पनि सम्हालिए प्रचण्ड । छोराको मृत्युको पीडा मनमा थेगेर उनी मंगलबार साँझ नै रौतहट गोली काण्डमा परी घाइते भएकालाई उपचार भइरहेको भरतपुरस्थित अस्पतालमै गएर पनि भेटे । नआत्तिन सान्त्वना दिन भ्याए । आफू यत्रो पीडामा हुँदा पनि उनी अरुको पीडामा मल्हम लगाउन तयार भए ।
केही दिन प्रचण्डलाई पछ्याएपछि उही गीतको प्रसंग फेरि उठ्छ, के लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन ? सत्य यो हो भन्ने लाग्छ कि लोग्ने मान्छे पनि रुन्छन्, पीडाले चौपट पोल्छ । प्रचण्डलाई पनि यस्तो पक्कै भयो, भएको छ । पार्टी कार्यालयमा कोठाभित्रै रोए, छोराको दाहसंस्कार सकाएर निवास फर्किएपछि कोठाभित्र एक्लै केहीबेर रोए रे । तर, परिवार र आफन्तसामु भने सम्हालिए । किनभने, उनी रुँदा परिवारमा पीडा झन् बढ्थ्यो । परिवारमा लिनुपर्ने यो जिम्मेवारी हाम्रो सामाजिक मान्यताले लोग्ने मान्छेलाई नै दिएको छ ।
आइतबार प्रचण्डको मनमा पनि पक्कै पीडा उर्लिएको थियो, धर्ती छाडेर गएको छोरोको शवलाई अंगालो हालेर ग्वाँ–ग्वाँ रोऊँ । तर, उनी सम्हालिए । अरुको पीडा कम गर्न पनि आफ्नो पीडा दबाए । लोग्ने नै रुन थालिदियो भने स्वास्नी झन् रुन्छिन्, अनि परिवारका सबै सदस्य । त्यहाँ, आँशु र पीडा सम्हालिसाध्ये हुँदैन । आफ्नो एकथोपा आँशु खस्दा परिवार, आफन्त र शुभचिन्तकका आँखाबाट सागर उर्लिन्छ भन्ने सायद प्रचण्डलाई पनि थाहा थियो ।
आफ्नो मनमा भक्कानो फुटेपनि आँशु छुटाउन नसकेको व्यहोरा उनले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । प्रकाशको निधनको भोलिपल्ट लाजिम्पाट निवासमा पुगेका शुभचिन्तकमाझ उनले यो वेदना पोखेका थिए । भनेका थिए, ‘पीडा त ठूलै छ, तर सम्हालिनु परेको छ ।’ उनले यसो भन्दै गर्दा उपस्थितका आँखा रसाएका थिए, तर आफू सम्हालिए । सायद, उनको मनमा पनि एउटा सोंच बलियो छ, लोग्ने मान्छे भएपछि सम्हालिनै पर्छ, लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन...।
हो हाम्रो सामाजिक चित्र र लय नै यस्तै छ । त्यसैले त भनिन्छ, लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन ।